ရွှေမြန်မာမှ ကြိုဆိုပါတယ်: September 2013
၂၂ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်သတင်း
၂၂ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ရသများစွာတို့နဲ့အတူ ပရိသတ်ဆီသို့ တဖန်ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကို စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် မှ ၂၂ ရက် အထိ နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံ (အမှတ် ၂၄၂-၂၄၈ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့) တွင် ကျင်းပသွားပါမည်။
ယခုနှစ် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ပြင်သစ်သံရုံး ရန်ကုန်မှ ဦးဆောင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ရှိ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နှင့် ဥရောပ ကောင်စီဝင် နိုင်ငံများဖြစ်သော ဂျာမနီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဗြိတိန် နှင့် ပြင်သစ် မှ ရုပ်ရှင်ကား နှစ်ကားစီ၊ အစ္စရေး၊ ပိုလန် နှင့် ချက်ခ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံ တို့မှ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားစီ စုစုပေါင်း ၁၁ ကားကို ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ် နှင့် ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ် ပြပွဲချိန်များတွင် ပြသပါမည်။
ရုပ်ရှင်ပြပွဲကို စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ကား ဖြင့် ညနေ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ် တွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆွစ်ဇာလန် ရုပ်ရှင်ကား ဖြင့် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် ညနေ ၆ နာရီ ၃၀ တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်မှလွဲ၍ ရုပ်ရှင်ကားအားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ဘာသာစကား ပြောဆိုပြီး English စာတန်း ပါမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်များကိုပွဲမစမီ ၁၅ မိနစ်အထိ ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
Note: No special invitation is needed to attend the festival. Tickets are free and can be collected at the cinema up to 15 minutes before the start of the film, ona‘first come first served’ basis. Each screening is sure to be popular, so make sure you arrive in good time to collect your ticket.
We very much look forward to welcoming you to the 22nd European Film Festival.
Thursday 12th September: Opening
(The Snows of the Kilimanjaro)
Cudowne lato (A Wonderful Summer)
Sunday 22nd September: Closing
Posted by manawphyulay at 8:35 PM No comments: